» हामी त ओली सगै छौं नि ! प्रचण्ड पो कहाँ पुग्छन् भन्ने चिन्ता छ त !- लिलाबहादुर थापा हामी त ओली सगै छौं नि ! प्रचण्ड पो कहाँ पुग्छन् भन्ने चिन्ता छ त !- लिलाबहादुर थापा – हाम्रो खबर
हामी त ओली सगै छौं नि ! प्रचण्ड पो कहाँ पुग्छन् भन्ने चिन्ता छ त !- लिलाबहादुर थापा
माओवादीमै हुँदा पनि मभन्दा धेरै कान्छा पनि मन्त्री भएका छन् । म पदका लागि राजनीति गर्ने मान्छे भए पहिल्यै मन्त्री भइसक्थें । विकास, दूरगामी सोच र निष्ठाको राजनीति यहीँबाट हुन्छ भनेर धेरै अध्ययन र सोचविचार गरेर आएको हुँ । भोलि परिआए जे जिम्मेवारी पनि निभाउन सक्छु । अन्लाइन खबर बाट